Filoha Hery Rajaonarimampianina tany Rome - Italie : «Vahaolana ho an’ny fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana » -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina tany Rome – Italie : «Vahaolana ho an’ny fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana »
Filoha Hery Rajaonarimampianina tany Rome – Italie : «Vahaolana ho an’ny fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana »
17/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ao anatin’ny fivahinianana ataony any Italia. Niatrika ny hetsika fankalazana ny faha-72 taonan’ny FAO, na ny rafitra eo anivon’ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena, ary nanamarihana ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fisakafoana ny filoha Malagasy, Hery Rajaonarimampianina. Olona faha-3 nandray anjara fitenenana tamin’io hetsika io, ny filoha malagasy taorian’ny Tale Jeneralin’ny FAO, Jose Graziano da Silva sy ny Papa François. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no nitondra teny tamin’ny anaran’ny vahoaka malagasy sy afrikana, amin’ny maha-filohan’ny COMESA azy tao amin’ny foiben’ny FAO tany Rome-Italia. Nisongadina tamin’ny fandraisam-pitenenana samihafa ny resaka fifindra-monina, izay nametrahana fa « safidy ka tsy tokony ankaterena ny fifindra-monina ». Ho an’ny filoha hery Rajaonarimampianina, « ny fametrahana fotodrafitrasa fototra any amin’ireo firenena ialan’ny mponina ao aminy no vahaolana amin’ny fitsoam-ponenana ». Nasongadiny ihany koa anefa fa « Ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana no entina mamaha ny olan’ny fifindra-monina. Rehefa afaka mamelona ara-dalàna ny mponina ao aminy ny firenena iray, dia tsy tokony hitsoaka izany firenena izany ny mponina. Nanamafy araka izany ny filoha fa « antoky ny fanamarinan-toerana maneran-tany izany. Any amin’ireo firenena ialan’ny mpitsoa-ponenena no tokony iompanan’ny fanampiana fa tsy any amin’ireo firenena mandray azy ireo ». Raha ny tarehimarika voaray, dia mahatratra 815 tapitrisa ny olona tsy afaka misakafo ara-dalàna maneran-tany ka ny 30%-n’izany dia ao amin’ny kaontintana afrikana. Ny 75% kosa dia any ambanivohitra.
Ankoatra ny tsy fahampiana, olana iray eo anivon’izao tontolo izao ihany koa ny tsy fahaiza-mitantana eo amin’ny resaka sakafo izay betsaka no very fotsiny raha tokony ho anjaran’ireo tsy manana. Nanao antso avo ny amin’ny tokony ahaizan’ny tsirairay mizara ny Papa François.
Nanatrika ny fotoana omaly ireo firenen-dehibe mivondrona ao amin’ny G7 izay nanamafy hatrany ny fanampiana entin’izy ireo. Nahatratra 3,4 tapitrisa Euros ny fanampiana avy amin’ny vondrona eropeana ny taona 2016.
Olana iombonan’ny firenena maneran-tany ankehitriny ny fifindra-monina, izay nahitana fiakarany hatramin’ny 40% teo anelanelan’ny taona 2000 sy 2015. Mahatratra 244 tapitrisa ny mpitsoa-ponenana tao anatin’ny dimy taona.